ओ, कमरेड ! काँध थाप्न गार्हो भयो यार ! « Gajureal
ओ, कमरेड ! काँध थाप्न गार्हो भयो यार !
प्रकाशित मिति: १२ आश्विन २०७५, शुक्रबार ११:४७
तपाईंहरु माथि हुनुहुन्छ, चुचुरोमा, बाह्र हातका टाङ्गाले पनि नछुने ठाउँमा । केही भनौं भने सुन्नुहुन्न, मागौं भने ‘हुन्छ’ भन्ने हो, दिनुहुन्न । किनभने तपाईं सांसद हो, मन्त्री हो, अनि न तपाईं नेता हो ।
निजी पिंडा पोखौं भने आदर्शको चिल्लोले चिप्ल्याउने, सामुहिक समस्या राख्यो कि ‘संङ्क्रमण’, ‘परिस्थिती’, ‘जटिलता’, ‘प्रयत्न’, ‘बिस्वास’जस्ता शब्दजालले मक्ख बनाउने कला कौशलमा पारङ्गत हुनुहुन्छ तपाईंहरु तव न तपाईं नेता हो !
बिचरा ! तपाईंहरुका पनि आ-आफ्ना समस्या छन् । कसैलाई बिगत निर्वाचनमा भएको खर्चले पोलेको छ । कबुल गरेको ठेक्का मिलाएर
ऋण मोचन् गर्नुछ । नेतृत्वमा रहिरहने अभिष्ट पूरा गर्न धेरै चिज गर्न बाँकी रहन्छ ।
भिन्न भिन्न प्रबृत्तिको उपस्थिति छ त्यो ठाउँमा । कतिलाइ पार्टी बनाउनु छ, कतिलाइ साथी, प्रतिष्ठाको महत्व राख्नु हुन्छ । तपाईंलाई दाम र नामको चिन्ता छ । त्यसैले हामी बुझ्छौं, तपाईंको समस्या तपाईंहरु नेता नै हो ।
आखिर हामी छौं र न, तपाईंहरु हुनुहुन्छ । त्यसैले आउनुहोस्, हाम्रो बारेमा पनि कुरा गरौं । हामी तपाईका बलिया हतियार हौं । तपाईंको बिचार भएर हामीले बोलिदिनु पर्छ, भनिदिनु पर्छ । चुनाव आउँछ, तपाईलाई बोकि दिनु पर्छ । तपाईंकै कुरा खोकीदिनु पर्छ । तपाईंले भन्नु भए हाँसी दिनुपर्छ, अनि रोईदिनु पर्छ । केवल बिचारको लेपनले रङगिएर, भोको आदर्शमा रमाउँदै तपाईंसंगै गुड्गुडिमा दौडिनु पर्छ ।
‘काम चल्यो भाँडो आफल् तेरो ठाँडो’ भने झैं हामी क्रमिकरुपमा छोडिंदै,खेदिंदै तिरस्कृतहुँदै जान्छौं । आखिर हामी जन्तो न हाैं । पहराको कापमा फलेकाे बनतरुल जस्तै हौं हामी । जति नैं मिठो होस्, अरुको ईच्छा बिना हाम्रो उपयोगिता नै रहन्न ।
सरकार र इमान्दारिता एक अर्काका दुश्मन नै रहेछन् । त्यहाँ कुनै निष्ठा र इमान्दारिता, सहजसँग अटाउँन नसक्ने रहेछ । तपाईंहरुका सामुन्नेमा उभिएर तन्द्रे, मुन्द्रे, हकदार, ठेक्दार, ख्वाउने, कमाउनेले टेडा आँखा हामीतीरै तरेका छन् ।
हामी त पर्खाल बाहिरबाट चिहाई रहने चुपचाप रमिते मात्र हौं । फगत् टुलुटुलु रमिते मात्र ।
आखिर उनिहरु को हाैं त हामी ? हामीहरु थिएनौं भने, न तपाईं न म ! क्या सुनेथे है उनिहरुले मिठ्ठा भाषण, भोक, प्यास र अभावले ग्रसित जीवनमा केहि होलाकी भनेर खुब मुख मिठ्याएका थिए । दवाई बेच्ने चटके र तपाईंमा के फरक थियो र ?
रङ्गी बिरङ्गी शब्दजालले तिनिहरुका मस्तिश्क सफाइ गर्न हामीलाई पनि निकै धारीला बनाएर पठाउनु भएको हैन ? अहो ! जनताका दुखः मोचनका ठेक्केदार हामी नै हौं भन्नूस है,भन्नु भाको थियो नी हैन ? अलीअली भएका सकारात्मक कुरालाई पनि पैताला मुनि कुल्चेर उनिहरुको मन मस्तिस्कमा नकारात्मक बिचार र परिस्थिति बुझाउनु भएको थियो नि !
नराम्रा परिणामको जिम्मेवार अरु नै हुन्, हामीहरु त परिवर्तनका बाहक हौं भन्नु भएको थियो नि, हैन ? चुनाव जित्न मात्र उनिहरुको महत्वकांक्षालाई क्या चढाउनु भयो है ! अनि आज उनिहरुले पाइपाई हिसाब मागे भनेर तपाईंले मन्टो बटार्न मिल्छ र ?
अहँ, यो कदाचित मिल्दैन । त्यसैले छिटो सुन्नुस उनिहरूलाई । उनीहरू बर्खाको भेल झै बग्न र बगाउन तँछाड मछाड गरिरहेका छन् । हामी काँध फेर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । सोच्नुस है ! समुद्री तटमा तैरनु अगावै